Shuangye ebike zvigadzirwa zvazvino zvakatangwa | ebike Shuangye
musha Shuangye achangoburwa emabhasikoro emagetsi akatangwa
Shuangye ebike zvigadzirwa zvazvino zvakatangwa
2020 igore rinoshamisa. Mugore rino, mabhasikoro emagetsi eShuangye anowirirana nenjodzi nemikana, uye panguva ino, isu tiri kunyatso kugadzirisa uye kumisikidza mabhasikoro emagetsi kupa vatengi dzimwe sarudzo. Kune akasiyana siyana achangokwidziridzwa mamodheru, uye panogara paine imwe iyo inogona kutora yako kufarira.
1. 26 ″ SHUANGYE inogadziriswa yemagetsi gomo bhasikoro (500W)
Kuti uwedzere kusimudzira ruzivo rwevatasvi, isu tinosimudzira mabhureki emagetsi emabhasikoro emagetsi, uye nekuvandudza ekutanga asingachinji mabharanzi kuti ave zvigadziriso zvinobata. Uku kusimudzira ndekwevashandisi vane urefu hwakasiyana. Zvinogona kutaurwa kuva zvine hushamwari. Iwe unogona kugadzirisa kana kudzikisa kukwirira kwemahabhu zvinoenderana neako akakwirira anodikanwa kuti uwane iyo yakanakisa yekutasva mamiriro uye nekuvandudza yako yekutasva ruzivo. Yakabatanidzwa nechigaro chinogadziriswa, iwo maviri anowirirana uye zvirokwazvo achakupa yakakwana kukwira kukwira ruzivo.
Ruvara: Chena / Dema
Mota: 48V 500W isina mabhureu isina-hub-mota
Max speed: 35-40 km / h
Bhatiri: 48V 10AH lithium bhatiri nekiyi
Garandi: mwedzi gumi nemaviri (mota & Bhatiri)
Kutanga maitiro: PAS uye throttle
Chaja: 54.6V 2A 100-240V yekuisa CE / UL Certification
Kutengesa nguva: 5-7 maawa
Mutongi: 48V Akangwara brushless
2.Brand nyowani isina mvura uye inokurumidza kuburitsa emagetsi emigwagwa bhasikoro 700 * 35C matai (250W)
Iwe uchiri kunetseka here nezvematai emabhasikoro emumugwagwa? Ipapo iwe unofanirwa kuziva nezve yedu yazvino izere-muviri isina mvura uye nekukurumidza-kuburitsa yemagetsi bhasikoro remugwagwa. Nzvimbo yekutanga yakajeka ndeyekuti tinoshandisa matai akapfuurisa 700 * 35C, ayo anogona kugamuchira mutoro wakawanda, achinyatso kuderedza mikana yekuputika kwetaya, uye kuchovha zvakanyanya kuvimbika; yechipiri inorumbidzwa ndeye yedu yakazara muviri Mvura isina mvura uye inokurumidza kusunungura mitsara inoratidza kuita kuri nani mukuchengetedza kwemazuva ese uye manejimendi. Semuenzaniso, kana mutsetse wakakuvara nekuda kwechimwe chikonzero, iwe unongoda kukwevera zvinyoro mativi maviri eiyo interface uye woitsiva neimwe nyowani kuti udzore chimiro chekutanga. Hazvisi nyore kwazvo here? Chechitatu ndiko kuwedzerwa kwechimiro, icho chakanyanya kukodzera kuvanhu muEurope neAmerica.
Mota: 36V 250W isina mabhureu isina-hub-mota
Chaja: 42V 2A 100-240V yekuisa CE / UL Certification
Cable: Kurumidza kuburitsa & isina mvura
Mutongi: 36V Akangwara brushless
Chimiro: 6061 Aluminium chiwanikwa
3. Ultralight kabhoni fiber bhasikoro remagetsi 36V ketheni bhatiri (350W)
"Zvikuru! Handisati ndamboona bhasikoro remagetsi risingaremi zvakadaro ”akadaro munhu akangowana ruzivo rwedu rwebhasikoro remagetsi bhasikoro. Kuti tivandudze mhando dzemabhasikoro emagetsi, kupa vashandisi sarudzo dzakawanda, uye kugadzirisa zvinhu zvemuviri, isu takasarudza kabhoni fiber, inoreruka uye yakareruka kupfuura zvimwe zvigadzirwa zvesimbi, simbi. Yakasimba, hupenyu hwebasa huchawedzera zvinoenderana. Izvo zvinorumbidzwa kuti iyo magnesium alloy kumberi uye kumashure kwakabatana mavhiri marimu akasimba kupfuura mamwe akajairwa marimu, uye mutengo wekuchengetedza uchaderedzwa.
Mota: 36V 350W isina mabhureu isina-hub-mota
Speed: 25-32 km / h
Bhatiri: 36V 10AH lithium bhatiri nekiyi
controller: 36V Akangwara haana bhurasho
Chimiro: Carbon fiber
Gumbo: Magnesium alloy 6 yakataura
4. 29 ″ yakazara kuturika yemagetsi gomo bhasikoro (350W)
Sebhasikoro remagetsi emagetsi, ibasa ripi raunonyanya kuda kuve naro? Mushure mekuferefetwa kwakawanda, takaona kuti makumi masere muzana evashandisi vanotarisira kuti mabhasikoro emakomo anogona kugadzirirwa neakanyanya kusimiswa buffer system, nekuti nzira huru yemigwagwa yemabhasikoro emakomo makomo kana makomba. Mune ino kesi, Iyo yekuvhundutsa-inopinza uye yekukanganisa system ine yepamusoro mashandiro inova inonyanya kukosha. Iyo yekuvhunduka yekumwa pamberi peforogo uye iyo yekuvhunduka kupinza pasi pechigaro inozadzikirana, iyo inogona kunyatso kuderedza mapundu anokonzerwa nemamiriro emumigwagwa.
Motokari: 36V350W isina girazi isina mabhururo-mota
Max speed: 25-35 km / h
Range: 1: 1 PAS modhi, 40-80KM
Mberi forogo: suspenison kumberi forogo
Kumiswa: kumiswa kumashure
5. Ultra-ine simba mbiri-mota mafuta tire yemagetsi moped (750W)
Unoda kutsvaga bhasikoro remagetsi rinokurumidza uye rine simba? Shuangye achangokwidziridzwa kumberi uye kumashure maviri-mota emagetsi mafuta tireti bhasikoro, kumberi vhiri mota iri 60V 750W, yekumberi vhiri mota ndeye 60V 750W, uye kumberi uye kumashure mavhiri anotyairwa pamwechete, izvo zvinokupa iwe wekupedzisira kukwira ruzivo. Iyo 20 ″ * 4.0 mafuta tire inogona kutakura huremu hwe150-200KG; matai makuru anowedzera nzvimbo yekubatana nepasi, uye yakasarudzika dhiraini pateni ichaita kuti iyo kutasva igadzikane uye inogona kunyatsoenderana nenzvimbo dzakasiyana siyana.
Motokari: 60V 750W maviri mota
Kukurumidza kumhanya: 40-45km / h
Bhatiri: 60V 18AH lithium bhatiri nekiyi
Chaja: 71.4V 3A 100-240V yekuisa CE / UL Certification
Mutongi: 60V Akangwara brushless
Kana iwe uchiri kuda kudzidza zvakawanda nezve mabhasikoro emagetsi, kana uchida kutenga mamwe marudzi emabhasikoro emagetsi, unogona kusiya zvaunoda uye neruzivo rwekutaurirana pazasi, uye isu tinokupindura iwe nekukurumidza sezvazvinogona. Kana shanyira webhusaiti yedu yepamutemo: www.zhsydz.com